ချော်ရည်ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း ကွန်ရက် မိုးလေဝသ
ဂျာမန် Portillo | 28/04/2022 10:00 | ဘူမိဗေဒ
မီးတောင်များသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် ၎င်းတို့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ လူများကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော်လည်း မီးတောင်များသည် အထင်ကြီးလောက်သော ဘူမိဗေဒဖွဲ့စည်းပုံများထဲမှ အချို့ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အဓိက မီးတောင်များ အများအပြားရှိသည့် ဒေသများ ရှိပြီး အချို့ မီးတောင်များ လှုပ်ရှားနေပါသည်။ ထို့ကြောင့် သဘောတရားများကို ဆက်စပ်၍ ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ထည့်သွင်းနိုင်စေရန် ခေါင်းစဉ်နှင့်ဆက်စပ်သော ဝေါဟာရအားလုံးကို နားလည်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ ဥပမာ, ချော်ရည်ဆိုတာဘာလဲဘယ်လိုဖွဲ့စည်းထားသလဲ၊ မီးတောင်မဂ္ဂမာနဲ့ ဘယ်လိုကွာခြားလဲ။
ဤဆောင်းပါးတွင် ချော်ရည်ဆိုသည်မှာ ဘာလဲ၊ ၎င်း၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများ၊ မူလအစနှင့် magma ကွာခြားချက်များကို ပြောပြပါမည်။
2 ချော်ရည်များ စီးဆင်းမှု အမျိုးအစားများ
2.1 block Cast ၊
2.2 AA အဝတ်လျှော်
3 ချော်ရည်နှင့် မဂ္ဂမာတို့၏ ကွာခြားချက်များ
ကမ္ဘာမြေကြီးအတွင်း၌ အပူသည် အလွန်ပြင်းထန်ပြီး အကျိတ်အညစ်အကြေးများ အရည်ပျော်သွားသော ကျောက်တုံးများနှင့် ဓာတ်ငွေ့များ။ ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာဂြိုဟ်တွင် ချော်ရည်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော အူတိုင်တစ်ခုရှိသည်။ ဤအူတိုင်ကို အပေါ်ယံလွှာနှင့် မာကျောသော ကျောက်လွှာများဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသည်။ ဤသွန်းလောင်းသော အရာသည် မဂ္ဂမာဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းကို ကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်သို့ တွန်းပို့သောအခါ၊ ချော်ရည်ဟု ခေါ်သည်။ အပေါ်ယံမြေလွှာနှင့် ကျောက်သားအလွှာနှစ်ခု ကွဲပြားသော်လည်း အမှန်တရားမှာ နှစ်ခုစလုံးသည် အမြဲတစေ ပြောင်းလဲနေပါသည်။ ခိုင်မာသောကျောက်သည် အရည်ဖြစ်လာပြီး အပြန်အလှန်အားဖြင့်။ magma သည် ကမ္ဘာမြေ၏ အပေါ်ယံလွှာမှတဆင့် စိမ့်ဝင်ပြီး ကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်သို့ ရောက်ရှိပါက ချော်ရည်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။
ဤအရာအားလုံးအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာမြေ၏ အပေါ်ယံလွှာမှ ထွက်လာသော ချော်ရည်များကို မဂ္ဂမာပစ္စည်းဟုခေါ်ဆိုပြီး မျက်နှာပြင်သို့ ပျံ့နှံ့သွားပါသည်။ ချော်ရည်များ၏ အပူချိန်သည် အလွန်မြင့်မားပြီး 700°C နှင့် 1200°C ကြား၊ လျင်မြန်စွာ အအေးခံနိုင်သော မဂ္ဂမာများနှင့် မတူဘဲ၊ ချော်ရည်များသည် ပိုသိပ်သည်းကာ အအေးခံရန် အချိန်ပိုကြာသည်။ ၎င်းသည် မီးတောင်ပေါက်ကွဲသည့်နေရာသို့ ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ပင် ချဉ်းကပ်ရန် အလွန်အန္တရာယ်များသည့် အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ချော်ရည်များ စီးဆင်းမှု အမျိုးအစားများ
ချော်ရည်အကြောင်းပြောတဲ့အခါ၊ မီးတောင်ပေါက်ကွဲတဲ့အခါ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ချော်ရည်အလွှာတွေဖြစ်တဲ့ ချော်ရည်စီးဆင်းမှုကို ရည်ညွှန်းတာပါ။ ဤမြင်ကွင်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသောအခါတွင် အတွေ့ရများဆုံးသော မြင်ကွင်းဖြစ်သည်။ ကုန်းတွင်းပိုင်း မီးတောင်တစ်ခုသည် ကုန်းစောင်းမှ ဖြည်းဖြည်းချင်း ဆင်းလာသော ချော်ရည်အလွှာကို ဖြာထွက်စေသည်။
သို့ရာတွင်၊ ကွဲအက်နေသောချော်ရည်ကဲ့သို့သော ချော်ရည်မျိုးကွဲထွက်သည့် အခြေအနေအမျိုးမျိုးရှိသည်။ ဤအခြေအနေမျိုးတွင်၊ ချော်ရည်အလွှာသည် ယခင်အခြေအနေနှင့်မတူဘဲ မြစ်နှင့်တူသော ဧရိယာကြီးကို ဖုံးလွှမ်းသွားသည်။
ထွက်လာတဲ့ ချော်ရည်အမျိုးအစားကို ထိခိုက်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းများစွာ ရှိပါတယ်၊ ဥပမာ- ချော်ရည်တွေ ထွက်လာတဲ့အခါ အသွင်အပြင်ကို ထိခိုက်စေတဲ့ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းမှုလိုမျိုး၊ ၎င်းကို အခြားသော ချော်ရည်အမျိုးအစားများအဖြစ် ပိုင်းခြားထားသော အမျိုးအစားခွဲခြားမှု ရှိကြောင်း ထင်ရှားသည်။
အမျိုးအစား ခွဲခြားမှုသည် ၎င်းတို့၏ မျက်နှာပြင် ရုပ်ပုံသဏ္ဌာန်အပေါ် အခြေခံပြီး ၎င်းတို့၏ ပေါင်းစပ်မှုနှင့် ပျစ်စွတ်မှုအပေါ်တွင် များစွာမူတည်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့ အောက်တွင် ဆန်းစစ်ပါလိမ့်မည်-
block Cast ၊
ဤချော်ရည်အမျိုးအစားသည် ၎င်း၏ ထူထပ်သောအသွင်အပြင်မှ ၎င်း၏အမည်ကို ရရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်း၏ ပါဝင်ပစ္စည်းများသည် ပုံမှန်ထက်ပို၍ အက်စစ်ဓာတ်များသောကြောင့် ရေဓာတ်လျော့နည်းစေသည်။ ဤချော်ရည်အမျိုးအစားများသည် ရွေ့လျားမှုနည်းပြီး အစုလိုက်အပြုံလိုက်များသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အတုံးများသည် ပုံမမှန်၍ ရှည်လျားပြီး သဲပုံပန်းသဏ္ဌာန် မရှိပါ။ ၎င်းတို့သည် ဆီလီကာများစွာပါဝင်သည့် ချော်ရည်များဖြစ်သည်။
ဤအခြေအနေတွင်၊ ချော်ရည်များသည် အရည်အနည်းငယ်ရှိပြီး ပျစ်ကာ ဖယ်ရှားရခက်ခဲသောကြောင့် အကျိတ်အခဲများ ကွဲထွက်ကာ အကျိတ်များဖြစ်ပေါ်တတ်သည်။ ၎င်းသည် ချော်ရည်များ ရုတ်တရက် ထွက်လာခြင်းအပေါ် အရေးပါသော သက်ရောက်မှုရှိပြီး အဆိုပါ ချွတ်ယွင်းချက်များ၏ အသွင်အပြင်ကို ဦးစားပေးသည်။ ဤ viscosity ၏နောက်ထပ်အကျိုးဆက်မှာ ၎င်းသည် လျင်မြန်စွာ မာကျောခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ဤချော်ရည်များသည် ကြီးမားသော ချော်ရည်များနှင့် နီးကပ်စွာ ဆက်စပ်နေသောကြောင့် အမျိုးအစားများစွာတွင် ၎င်းတို့ကို အမျိုးအစားတစ်ခုတည်းတွင် ထားရှိသည်။ ၎င်း၏ထူးခြားသောအမည်သည် ဟာဝိုင်အီစကားမှဆင်းသက်လာပြီး "သန့်စင်သောချော်ရည်ကျောက်" ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသည်။. ညီညာပြီး မညီညာသော မျက်နှာပြင်များပါရှိသော အုပ်စုများလည်း ဖွဲ့သည်။ ဤတုံးများကို clinker ဟုခေါ်သည်။
၎င်း၏ဖွဲ့စည်းမှုသည် အလွန်အက်စစ်ဓာတ်မဟုတ်သည့်အတွက် ယခင်ကိစ္စနှင့် မတူသောကြောင့် ဤချော်ရည်များသည် ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး ကြမ်းတမ်းသောအသွင်အပြင် နည်းပါးသည်။ ချော်ရည်များသည် Basaltic အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ကြမ်းတမ်းပြီး ပုံမမှန်သော အဖုများထွက်ရှိသည်။ ၎င်း၏ ရှေ့သွားအမြန်နှုန်းသည် တစ်နာရီလျှင် ၅ မီတာမှ ၅၀ မီတာကြားတွင် အလွန်နှေးကွေးသည်။ ဒီအခြေအနေက အဆုံးသတ်ကို ရှုတ်ထွေးပြီး ရှုပ်ထွေးသွားစေတယ်။
ဤချော်ရည်အမျိုးအစားများသည် အခြေခံအားဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ခရီးဝေးကို သွားလာနိုင်စွမ်းရှိသည်။ သူ၏အမည်သည်လည်း ဟာဝိုင်အီစကားမှဆင်းသက်လာပြီး "ချစ်စရာ"ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ ကြိုးများ အစုံလိုက်ပုံရသည်ဖြစ်သောကြောင့် ဝါယာမှိုဟုလည်း ခေါ်သည်။
ဤဖွဲ့စည်းမှုသည် ယခင်ကိစ္စနှင့် ဆင်တူသော ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင်လည်း ဤချော်ရည်အမျိုးအစား၏ မျက်နှာပြင်သည် ဦးစွာ အေးသွားကာ ဤအလွှာအောက်တွင် ချော်ရည်များသည် အရည်အဖြစ် ဆက်လက်စီးဆင်းနေပါသည်။ ဒီကိစ္စမှာ, ခြားနားချက်မှာ ချော်ရည်၏ viscosity ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ ပျော့ပျောင်းမှုနှင့် အရည်ပျော်မှုတို့ကြောင့် ၎င်းသည် မျက်နှာပြင်အစိုင်အခဲများကို မပျက်စီးစေဘဲ ၎င်းတို့ကို ပုံပျက်စေသောကြောင့် အတွင်းမှထွက်ရှိသော ချော်ရည်များ၏ အရည်ထွက်မှုကို ထင်ဟပ်စေသည့် ဤချော်ရည်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် လှိုင်းများဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
Insulating lava သည် ရေအောက်တွင် ခိုင်မာစေသော ချော်ရည်အလွှာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့ဟာ တကယ်တော့ ခေါင်းအုံးနဲ့ ဆင်တူပြီး တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ထိပ်မှာ စီထားတဲ့ ခေါင်းအုံးတွေကနေ သူတို့ရဲ့ နာမည်ကို ရကြပါတယ်။
၎င်း၏ပုံသဏ္ဍာန်သည် အဝိုင်းဖြစ်သော်လည်း ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိသည်။ ပိတ်ဆို့ခြင်း၊ လုံးပတ်၊ tubular စသည်တို့. ၎င်းတို့သည် ပုံပန်းသဏ္ဌာန်တူသော်လည်း ချော်ရည်အမျိုးအစားနှင့် ငွေ့ရည်ဖွဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်သည့် အခြေအနေများပေါ်မူတည်၍ ၎င်းတို့သည် များစွာကွဲပြားသည်။ အအေးပေးခြင်းသည် ချက်ခြင်းနီးပါးဖြစ်ခဲ့သော်လည်း မျက်နှာပြင်သည် အရေးအကြောင်းများ၊ အက်ကွဲကြောင်းများ၊ အစင်းကြောင်းများနှင့် ထောင့်မှန်ကွဲအက်ခြင်းများစွာဖြင့် ချောမွေ့ခြင်းမရှိပါ။
ချော်ရည်နှင့် မဂ္ဂမာတို့၏ ကွာခြားချက်များ
အခြေခံအားဖြင့်၊ ချော်ရည်နှင့် magma တို့သည် တူညီသည်ဟု သင်ထင်ကောင်းထင်နိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် မဟုတ်ပါ။ ပထမ၊ သင်က အူတိုင်နဲ့ ပိုနီးလေလေ ဖိအားပိုများလေပါပဲ။ ထို့ကြောင့်၊ ဖိအားများလေလေ ၎င်း၏ဖွဲ့စည်းမှုတွင် ဓာတ်ငွေ့များလေလေဖြစ်ပြီး မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ ဓာတ်ငွေ့များ ပိုမိုထွက်ရှိလာလေဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် အပူချိန်နိမ့်ကျကာ လေထု သို့မဟုတ် ရေနှင့် ထိတွေ့ကာ ရေအောက် ချော်ရည်များ ထွက်လာသည်နှင့် နောက်ဆုံးတွင် ချော်ရည်များ ရပ်တန့်သွားကာ မီးတောင်ကျောက်များ ဖြစ်လာသည်။ magma နှင့် lava ကို တစ်ခါတစ်ရံ အဓိပ္ပါယ်တူအဖြစ် သုံးကြသော်လည်း အမှန်တရားမှာ ၎င်းတို့သည် မတူညီသော ဝေါဟာရနှစ်ခုဖြစ်သည်။ နှစ်ခုလုံးသည် မီးတောင်များနှင့် ဆက်နွှယ်သော်လည်း မတူညီသော အယူအဆနှစ်ခုကို ဖော်ပြသည်။
Magma သည် အပူချိန်လွန်ကဲစွာ ထိတွေ့နိုင်သော ကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်ရှိ သွန်းသောကျောက်အလွှာများကို ပေးသော အမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို အရည်၊ မတည်ငြိမ်သော နှင့် အစိုင်အခဲအမှုန်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ မဂ္ဂမာအေးသွားသောအခါတွင် ၎င်းသည် ၎င်း၏တည်နေရာကိုအခြေခံ၍ အမျိုးအစားနှစ်မျိုး ခွဲခြားနိုင်သော မီးသင့်ကျောက်ဖြစ်လာသည်။
မီးတောင်: မဂ္ဂမာအရည်ပျော်ပြီး ကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်သို့ တက်လာပါက၊
ချော်ရည်များသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ကျွန်းများစွာဖြစ်သည့် Canary ကျွန်းစုများကဲ့သို့ ကျွန်းအများအပြားကို ပုံဖော်ပေးသည့် သဘာဝဘူမိဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုနှင့် ချော်ရည်များ အဆက်မပြတ်ထွက်နေသည်မှာ နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
ချော်ရည်ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာနဲ့ magma နဲ့ သူ့ရဲ့ ခြားနားချက်ကို ကောင်းကောင်းနားလည်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » ဘူမိဗေဒ » ချော်ရည်ဆိုတာဘာလဲ
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဗင်နီဇွဲလားဇာတိမြေ ဗင်နီဇွဲလားတွင် မွေးဖွားပြီး လွတ်မြောက်ပြီးနောက် အခြားလူမျိုးများ လွတ်မြောက်ရေး အောင်မြင်မှုနှင့်အတူ မစ်ရှင်ကို ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော ကြီးကျယ်ခမ်းနားမှုဖြင့် ခံယူခဲ့သည်၊ ထူးထူးခြားခြား ရောင်ပြန်ဟပ်မှုများသည် သဘာဝတရားက ဆန့်ကျင်ပါက ကျွန်ုပ်တို့ တိုက်ဖျက်မည် ဖြစ်သည်။ ၁၈၁၂ ခုနှစ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏မွေးရပ်မြေငလျင်တွင်ပြောခဲ့သော ကျွန်ုပ်တို့စကားကို နာခံစေမည်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ 1812 မှ 1999 ခုနှစ်အထိ လိုက်ပါလာခဲ့သည့် ထင်ရှားကျော်ကြားသော ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံသား Simón Bolívar နှင့် Hugo Rafael Chávez တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ Venezuelan မွေးရပ်မြေသို့ ယနေ့အထိ ထာဝရတည်ရှိနေပါသည်။ တူညီသောခြေလှမ်းများဖြင့် ဗင်နီဇွဲလားသမ္မတနှင့် တိုက်ပွဲတွင် နီကိုလက်စ်မာဒူရို မိုရော့စ်သည် ကျွန်ုပ်တို့ အနိုင်ယူ၍မရနိုင်သော ထာဝရယုတ္တိတစ်ခုဖြစ်သည်။